Soo dejisan PrivalSystems 77.4 – Vessoft
PrivalSystems – software ah waxaa diiradda lagu saaray isgaarsiinta ammaan ee internet-ka. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u fuliyaan cod iyo video calls, fariimaha qoraalka sarrifka, diri faylasha lo, iwm PrivalSystems isticmaalaa ah maamuuska network lo ilaalinta lagu kalsoonaan karo wareejinta xogta. software waxa uu leeyahay tiro balaadhan oo ah qalabka iyo qoreysa isgaarsiinta fudud la isticmaala kale. PrivalSystems bixisaa itimaalka yar baxsiga xogta shakhsiga by kaydinta taariikhda waraaqo toos ah ee macmiilka oo ay sabab u la’aanta ah ee aqoonsiga user by lambarka telefoonka.
encryption file Previous hor wareejinta
Protection ka dhanka ah dhexda xogta ee shabakadda
la’aanta ee isgaarsiinta leh macaamiisha kale oo ku saabsan hab maamuuska isgaarsiinta guud
Soo dejisan PrivalSystems
Faallo ku saabsan PrivalSystems
PrivalSystems Xirfadaha la xiriira
Mailbird – waa macaamiil iimeel oo awood badan oo ku habboon inay la shaqeeyaan akoonno badan. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad lashaqeyso adeegyo iyo barnaamijyo kala duwan oo internetka ah.